China Flange Akara gasketị gburugburu ọnya gasket - CIXI Dongfeng SEALING & nkwakọ ngwaahịa Co., Ltd
China Flange Akara gasket gburugburu ọnya gasket
Igwe gas na-emerụ ahụ nwere "V-udi" (ma ọ bụ "W-udi") teepu igwe na teepu na-enweghị atụ, nke a na-agbarịta ibe ya na ọnya na-aga n'ihu. Iji jikọta teepu ígwè ahụ, ma mmalite ya na njedebe ya bụ weld welded. Njirimara sara mbara nke onodu oru di nma. Enwere ike iji ya n'okpuru nnukwu okpomọkụ, nrụgide dị elu na ọnọdụ okpomọkụ dị ala ma ọ bụ ọnọdụ agụụ. Gbanwee nchikota nke ihe gasket bu iji mee ka nsogbu nke nsogbu di iche iche di iche ...
Gaset gburugburu ọnya jupụtara na Graphite